တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ခြေလှမ်း ၃၀၀ တိုင်ခဲ့ပြီ ...
Posted by မေဓာဝီ at 3:05 AM
>>> ကျမ ဘလော့ဟာ တခြားဘလော့တွေနဲ့စာရင် အင်မတန်မှ ရိုးရှင်းနေမှာအမှန်ပါပဲ။
I believe "simple is beautiful." :) :)
7/14/2007 6:07 AM
နောက်မှာ အမြဲ ရပ်နေပါတယ် မမေ။
(ရှေ့ကနေရင် ကိုယ့်ကိုအရင် လာထိမှာစိုးလို့ အဟဲ)
အကြိမ် ၃၀၀ မြောက်ပို့စ်မှာ နောက်ခံအရောင် အနက်ကို ပြောင်းပေးဖို့ ၂ ကြိမ်မြောက် တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
I am always be one of your fan.
I read your blog's everyday but I didn't write comment for everyday.
Today I wish you good work and happily for next step.
7/14/2007 4:55 PM
ပို့စ်ပေါင်း ၃၀၀ တောင် ရှိသွားပြီ။ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ မမေရေးတဲ့ စာတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် အမြဲတမ်း တန်ဖိုးထား စောင့်ဖတ်ရပြီး ဖတ်ပြီး မေ့ပစ်ဖို့ မဟုတ်ပဲ သေသေချာချာ သိမ်းဆည်းထားရမယ့် စာကောင်းပေမွန်တွေမို့ပါ။ နောင်ကိုလည်း မမေရဲ့ စာပေတွေ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ အမြဲတမ်း လာဖတ်နေဦးမှာပါခင်ဗျာ။
ကိုလွင်မိုး၊ ပန်ဒိုရာ၊ ကိုသက်ဦး၊ မခိုင် နှင့် ကိုမျက်လုံး …
ဖတ်ရှု အားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကိုသက်ဦးကိုတော့ အားနာပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျမ အပြောင်းအလဲ မလုပ်ချင်သေးတာမို့ အနက်ရောင် နောက်ခံလေးနဲ့သာ သည်းခံဖတ်ရှုပေးပါအုံးနော်။
7/15/2007 4:28 AM
မမေရေ မင်းသားဒွေး သေဆုံးပြီးနောက်ရက်ကစလို့ နှစ်လုံးထီသမားတွေ ဒွေး အသက်၊ ဒွေးနာမည် စသဖြင့် သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့အရာတွေကို အတိတ်ကောက်ပြီး နှစ်လုံးထီ ထိုးနေကြတယ်ဆိုတာ ကြားရတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ နှစ်လုံးထီလောကကို တော်တော်လေးစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း အနီးအနားက လူတစ်ယောက်သေရင် သူ့အမည် သူ့အသက်ကို အတိတ်ကောက်ပြီး နှစ်လုံးထီထိုးကြတာတွေ ကြားနေရတာကြာပါပြီ။ ကျွန်တော်သေရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သေရမှာ ကြောက်တောင်လာပြီ။ နှစ်လုံးထီအတိတ်ကောက်ခံရမှာစိုးလို့ပါ။ မမေရဲ့ ပို့စ်တွေအကုန် မဖတ်ရသေးတဲ့အတွက် နှစ်လုံးထီနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးထားတာရှိ၊ မရှိ မသိပါ။ နှစ်လုံးထီထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာတွေများပါပြီ။ နှစ်လုံးထီနဲ့ပတ်သက်လို့ မမေစိတ်ကူးရလို့ ရေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဖြေဆေးအနေနဲ့ နှစ်သိမ့်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းတစ်လေ ဖတ်ချင်မိပါတယ် မမေရယ်။
7/15/2007 4:36 AM
မမေရဲ့ ပို့စ် ၃၀၀ မှ နောင် ပို့စ်ပေါင်းများစွာကို ရေးနိုင်ပါစေရှင်း)
wish you continues writing your thought about daily life something like "this morning" post. I amaregular reader of your blog although I rare to post any comment.
ကောမန့်မပေးဖြစ်ပေမယ့် အားပေးနေပါတယ် မမေဓာဝီရေ။ ပြီးတော့ မြန်မာစာ အရေးအသားနဲ့ ဝေးနေတဲ့ ကျွန်တော်လို လူအတွက် အရေးအသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မမေဓာဝီ ဘလော့ဂ်ဆီက လေ့လာနေဆဲပါဗျာ။ ဆက်ပြီးတော့လဲ ဒီထက် များများ ပို့စ်လုပ်နိုင်ပါစေ။
7/16/2007 6:07 AM
I am one of your supporters since you were not blogger till now, but no comment can be written here on public for your happiness. May your blog long life !!!!
ရောက်တာ နောက်ကျသွားတယ် အစ်မရေ။ Congratulation နော်။ ဒီထက်အဆပေါင်းများစွာ ရှေ့ဆက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့
7/17/2007 6:00 AM
Hello Ma May dar wii,
Can you pls give me ur email address? I have something Important( for me ) to tell you.thanks ur kindness.
I also love to read and write blog coz I love to read others' feeling and thoughts.
And sis, your blog is interesting and knowledge sharing. I like it and hope u keep it going.